पर्वतमा आजदेखि १२ औँ चरणमा हात्तिपाईले बिरुद्धको औषधी ख्वाईदै - News site from Nepal
पर्वत – पर्वतमा आजबाट १२ औँ चरणमा हात्तिपाईले बिरुद्धको औषधी ख्वाउने तयारी गरिएको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय संगै सात वटै स्थानीय तहले औषधी ख्वाउने तयारी पुरा भएको जनाएका छन् । जिल्लामा ११ औँ चरण सम्म औषधी ख्वाउँदा पनि रोग निको नभएपछि १२ औँ चरणमा आजबाट औषधी ख्वाउने तयारी रहेको छ ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार यसचरणमा एक लाख २५ हजार १ सय ५९ जनालाई औषधी ख्वाउने भएको छ । औषधी ख्वाउनका लागि स्वास्थ्यकर्मीहरु परिचालन भएका छन् । सबै वडामा एकै दिन अभियान शुरु गरेर बढिमा एक हप्ताभित्र ख्वाइसक्ने लक्ष्य रहेको स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डा. भोजराज गौतमले बताउनुभयो । हात्तिपाईले रोगको संक्रमण जिल्लामा अहिले पनि ५ प्रतिशत भन्दा बढि देखिएको छ । औषधी वितरण गरेपनि सर्वसाधारणहरुले सेवन नगर्ने समस्या रहेको स्वास्थ्यकर्मीहरुले बताउँदै आएका छन् । औषधी नखाने समस्या देखिएपछि गतवर्ष देखि स्वास्थ्यकर्मीकै निगरानीमा औषधी ख्वाउन थालिएको थियो ।
यस वर्ष पनि स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा औषधी ख्वाईने पर्वत अस्पतालका प्रमुख डा. डिवी क्षेत्रीले जानकारी दिनुभयो । क्षेत्रीले औषधी ख्वाउने अभियानलाई सबैले सहयोग गर्ने र पर्वतमा अर्को चरणमा औषधी खान नपर्ने गरि सबै सयन्त्र लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । पर्वतमा सन् २०१० देखी हात्तिपाईले बिरुद्धको औषधी ख्वाउने अभियान शुरु भएको थियो । आम औषधी सेवन गर्ने दर ७५ प्रतिशत रहेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । पर्वतको कुश्मा नगरपालिकाले हात्तिपाईले रोग बिरुद्धको औषधी ख्वाउने अभियानको प्रचारप्रसार लाई व्यापक बनाएको छ । हरेक वडामा सचेतना प्रशिक्षण सञ्चालन गरिएको कुश्मा नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ ।
हरेक टोलका चोकमा व्यानर टाँगेर औषधी खान आउन सर्वसाधरणहरुलाई अनुरोध गरिएको छ । जनप्रतिनिधी र कर्मचारीहरु घरघरै पुगेर औषधी खान सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरेका स्वास्थ्य संयोजक उमाकान्त सापकोटाले बताउनुभयो । आम औषधी खान कोहि पनि नछुटुन भन्नेमा सचेत रहेको सापकोटाले बताउनुभएको छ ।